Chelsea Oo Dalab Ka Gudbisay Difaac Man City Ka Tirsan Oo Uu Booska Ku Cidhiidhyay Difaacii Blues Ee Ake Oo City Ku Soo Biiray. - Gool24.Net
Chelsea Oo Dalab Ka Gudbisay Difaac Man City Ka Tirsan Oo Uu Booska Ku Cidhiidhyay Difaacii Blues Ee Ake Oo City Ku Soo Biiray.
Kooxda Chelsea ayaa ayaa dalab ka gudbisay difaaca aan booska ka haysan kooxda Pep Guardiola ee John Stones waxaana xaalada xidigan sii xumeeyay heshiiskii ay dhawaan Man City kula soo saxiixatay difaacii hore ee Blues ee Ake.
Wargayska The Sun ayaa qoray in Chelsea ay dalab 20 milyan gini ah ka gudbisay difaaca dhexe ee John Stones kaas oo la filayo in xili suuqan uu ka bixi doono Etihad Stadium.
Kooxda Guardiola ayaa 45 milyan gini kula soo saxiixatay difaacii kooxda Bournemouth ee Nathan Ake kaas oo hore uga soo ciyaaray Chelsea laakiin Frank Lampard iyo kooxdiisa Blues ayaa ka faa’iidi kara in Ake uu Man City ku soo biiray.
Tababare Pep Guardiola ayaa lumiyay kalsoonidii uu Etihad Stadium lacagta qaaliga ah ugu keenay John Stones kadib markii uu si deg deg ah ula soo saxiixday Nathan Ake oo 25 sano jir ah kaas oo la filayo in uu xili ciyaareedka cusub muhiim ka noqon doono shaxda City.
Laakiin Chelsea oo la dhibtoonaysa in ay hesho difaacyo dhexe oo kooxdeeda ka saari kara dhibaatadii ka soo gaadhay Bayern Munich ayay wararku sheegayaan in ay dalab 20 milyan ah ka gudbisay John Stones.
Khabiirka Sky Sports ee Pual Merson ayaa dhawr todobaad ka hor maamulka kooxda Chelsea u soo bandhigay in ay la soo saxiixdaan John Stones kaas oo uu ku dooday in uu Chelsea kaga haboon yahay kooxdiisa hadda ee Man City.
Pual Merson ayaa markii uu soo bandhigayay in Chelsea ay la soo saxiixato John Stones waxa uu sheegay in uu si fiican uga garab ciyaari karo Antonio Rudiger ama Christensen.
Kooxda West Ham United ayaa hore u ahayd kooxda lala xidhiidhinayay saxiixa John Stones iyada oo wararku sheegayeen in uu la midoobi karo macalinkiisii hore ee Everton ee David Moyes balse xiisaha Chelsea ayaa meesha ka saari kara warkan hore.
Si kastaba ha ahaatee, ilaa hadda lama oga haddii Man City ay aqbali karo dalab 20 milyan gini ah iyo haddii ay koox ay xifiltamayaan ka iibin karto xidig kooxdeedu u aragtay in aanu hadda doorkii hore heli karin.